ဝင်းမြတ်အေး၊ ဦး - ဝီကီပီးဒီးယား
ဒေါက်တာ ဦးဝင်းမြတ်အေး (၁ ဇွန် ၁၉၅၄ မွေးဖွား) သည် မြန်မာနိုင်ငံသား နိုင်ငံရေးသမားနှင့် လက်ရှိတွင် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး မဲဆန္ဒနယ် ၄ ကိုယ်စားပြု အမျိုးသားလွှတ်တော် အမတ်အဖြစ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ သူသည် ကလေးအထူးကု သမားတော်တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး ဆေးတက္ကသိုလ် (မကွေး)၏ ပါမောက္ခချုပ်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၆ မတ်လ ၂၂ ရက်နေ့တွင် လူမှုဝန်ထမ်း ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးအဖြစ် လျာထားခြင်း ခံရသည်။
ဦးဝင်းမြတ်အေးကို ၁၉၅၄ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့တွင် ပဲခူးတိုင်း၊ ပြွန်တန်ဆာမြို့တွင် မွေးဖွားသည်။ ၁၉၈၀ မတ်လတွင် ဆေးပညာဘွဲ့၊ ၁၉၉၄ ဖေဖော်ဝါရီတွင် ကလေးကျန်းမာ မဟာဘွဲ့နှင့် ၂၀၀၆ အောက်တိုဘာလတွင် ကလေးကျန်းမာ ပါရဂူဘွဲ့များကို ဆေးတက္ကသိုလ်(၁) ရန်ကုန်မှ ရရှိခဲ့သည်။
ဦးဝင်းမြတ်အေးသည် ၁၉၈၈ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၈ ခုနှစ်အထိ လက်ထောက်ဆရာဝန်ရာထူးဖြင့် ရန်ကုန် ကလေးဆေးရုံကြီးတွင် လည်းကောင်း၊ ၂၀၀၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၄ ခုနှစ်အထိ ဝေဘာဂီဆေးရုံကြီးတွင် အထူးကုဆရာဝန် (ကလေးကျန်းမာ) တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၆ ခုနှစ်အထိ ကထိက၊ ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၇ ခုနှစ်အထိ တွဲဖက်ပါမောက္ခတာဝန်များကို ဆေးတက္ကသိုလ် (မကွေး)တွင် လည်းကောင်း၊ ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၀ ခုနှစ်အထိ တွဲဖက်ပါမောက္ခ၊ ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အထိ ပါမောက္ခအဖြစ် ဆေးတက္ကသိုလ်(၁) ရန်ကုန်တွင်လည်းကောင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၁၃ တွင် ဦးဝင်းမြတ်အေးသည် ဆေးတက္ကသိုလ် (မကွေး)၏ ပါမောက္ခချုပ်အဖြစ် ၂၀၁၄ ခုနှစ် မေလ ၃၀ ရက်နေ့ အငြိမ်းစားယူသည်အထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
↑ ဒေါက်တာဦးဝင်းမြတ်အေး အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ။ mVoter2015။ 22 March 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "42nd MYANMAR HEALTH RESEARCH CONGRESS". Department of Medical Research (Lower Myanmar). January 2014. Retrieved 22 March 2016.
↑ ၅.၀ ၅.၁ Prof. Dr. Win Myat Aye။ 22 March 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဝင်းမြတ်အေး၊_ဦး&oldid=406233" မှ ရယူရန်
၁၆ ဇွန် ၂၀၁၈၊ ၁၈:၄၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၆ ဇွန် ၂၀၁၈၊ ၁၈:၄၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။